Dubai International Finance Center | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ivontoerana Iraisam-pirenena Dubai
Ireo mpisolovava mpisolovava dia manampahaizana manokana any Dubai International Financial Center (DIFC) ary manana ekipa voatokana izay manome torohevitra anao amin'ny lafiny rehetra momba ny DIFC, ao anatin'izany ny fametrahana sy fampandehanana vola, andrim-panjakana sy orinasa eo afovoany. Manoro hevitra ihany koa izahay amin'ny fanomezan-dàlana ny hetsika, ny fankatoavana ny fitsipika avy amin'ny Dubai financial service Authority (DFSA), ny fampandehanana sy fandraisana anjara amin'ny NASDAQ Dubai sy ny olana rehetra amin'ny fanarahan-dalàna. Ny ekipanay dia nisolo tena ireo mpanjifaka mifandray amin'ny fanadihadiana nataon'ny DFSA ary nanoro hevitra momba ny hetsika fampiharana an-dry zareo.
Ny Ivotoerana Ara-bola Iraisam-pirenena any Dubai dia natao ho varotra malalaka ara-bola manolotra rafi-pitondrana miavaka sy ara-dalàna tsy miankina, ahafahana mamorona tontolo iainana momba ny fitomboana, ny fivoarana ary ny fampandrosoana ara-toekarena amin'ny Emirates Arabo Mitambatra sy ny faritra lehibe kokoa. Ny Fitsarana DIFC dia manana fahefana momba ny ankamaroan'ny raharaha sivily sy ara-barotra mitranga ao amin'ny DIFC, ary koa ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny ekipanay dia mitarika ny sehatra amin'ny torohevitra amin'ny antoko mandritra ny fanadihadiana DFSA ary raha ilaina, dia mifampiraharaha amin'ny toeram-ponenana ho azy ireo. Ny fanazaranay dia ny torolàlana nomen'ny orinasa voalohany nahazo famatsiam-bola avy amin'ny DFSA ary efa nanoro hevitra izy ireo nifandray tamin'ny ankamaroan'ny fanadihadiana DFSA izay niteraka valim-bahoaka.
Mifandraisa tsara aminay Karazana DIFC